“သင်ျဘောပငျ စိုကျပွီး အသားထူထူ အစနေဲ့နဲ ပွှတျခဲနအေောငျ သီးစသေောနညျး” - Barnyar Barnyar
အ စေ့ ကို တဈ ရကျ နေ လှနျး ပွီး ပြိုး ပငျ ဖောကျ ပါ။ အဲ့ ဒီ ပြိုး ပငျ လေး(၇ ရကျ) ပွညျ့ တဲ့ အ ခါ ခှဲ စိုကျ မယျ့ နေ ရာကို….
(၁) တှငျး ဝ တဈ ပေ၊ အ နကျ တဈ ပေ ခှဲ တူး ပွီး တှငျး ထဲ ကို သဈ ရှကျ ခွောကျ ဖွဈ စေ… ကောကျ ရိုး ခွောကျ ဖွဈစေ ထညျ့ ပွီး မီး ရှို့ ပါ။နှဈ ကွိမျ ပွု လုပျ ရနျ လို အပျ ပါ သညျ။ ပွာ ကြ ပွီး တာ နဲ့ တှငျး ထဲ ကို ရေ အ ပွညျ့ လောငျးပွီး တဈ ည ထား ပါ။
(၂) အ ပငျ စိုကျ မယျ့ တှငျး အောကျ ခွေ မှာ ထုံး မှုနျ့ ငါး ဆယျ သား ခနျ့ ဖွူး ပွီး ထုံး ပျေါ မှာ မွေ ဆှေး လကျ ငါး သဈခနျ့ ထညျ့ ပါ။
(၃) လ်ဘကျရညျဆိုငျတှမှော စှနျ့ပဈ စုပုံထားကွတဲ့ နှပျပွီးသား အခြိုခွောကျ အဖတျတှကေိုယူ နှားခြေးခွောကျနှငျ့ ဆတူ ရောသမမှပွေီး တဈနလှေနျးပါ။ ပွီးလြှငျ တှငျးထဲသို့ တဈထှာခနျ့ ထပျဖွညျ့ပါ။ ၎င်းငျး အပျေါမှ ထပျမံ၍ မွဆှေေးအပွညျ့ ထညျ့လိုကျပွီး ပြိုးပငျကို စိုကျပြိုးပါ။
(၄) ပြိုးပငျ (၂ ပေ)ခနျ့ ကွီးလာတဲ့အခါ အပငျရငျး ပတျလညျကို မီးဖိုကရတဲ့ ပွာမှုနျ့၊ မီးသှေးမှုနျ့တှကေို အုံထားပေးပါ။ နံနကျစောစောနှငျ့ နဝေငျပွီးခြိနျ၌ တဈနနှေ့ဈကွိမျ ရမှေနျမှနျ လောငျးရပါမယျ။
အဝါရောငျအသားရှိတဲ့ သင်ျဘောသီးကို အနီရောငျဖွဈစခေငျြရငျတော့ အောကျခွမှော ဖွူးထားတဲ့ ထုံးမှုနျ့ကို မီးသှေးအမှုနျ့နဲ့ ဆတူရောစပျပွီး စိုကျပါ။
#Credit thai agriculture magazine
“သင်္ဘောပင် စိုက်ပြီး အသားထူထူ အစေ့နဲနဲ ပြွတ်ခဲနေအောင် သီးစေသောနည်း”
အ စေ့ ကို တစ် ရက် နေ လှန်း ပြီး ပျိုး ပင် ဖောက် ပါ။ အဲ့ ဒီ ပျိုး ပင် လေး(၇ ရက်) ပြည့် တဲ့ အ ခါ ခွဲ စိုက် မယ့် နေ ရာကို….
(၁) တွင်း ဝ တစ် ပေ၊ အ နက် တစ် ပေ ခွဲ တူး ပြီး တွင်း ထဲ ကို သစ် ရွက် ခြောက် ဖြစ် စေ… ကောက် ရိုး ခြောက် ဖြစ်စေ ထည့် ပြီး မီး ရှို့ ပါ။နှစ် ကြိမ် ပြု လုပ် ရန် လို အပ် ပါ သည်။ ပြာ ကျ ပြီး တာ နဲ့ တွင်း ထဲ ကို ရေ အ ပြည့် လောင်းပြီး တစ် ည ထား ပါ။
(၂) အ ပင် စိုက် မယ့် တွင်း အောက် ခြေ မှာ ထုံး မှုန့် ငါး ဆယ် သား ခန့် ဖြူး ပြီး ထုံး ပေါ် မှာ မြေ ဆွေး လက် ငါး သစ်ခန့် ထည့် ပါ။
(၃) လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ စွန့်ပစ် စုပုံထားကြတဲ့ နှပ်ပြီးသား အချိုခြောက် အဖတ်တွေကိုယူ နွားချေးခြောက်နှင့် ဆတူ ရောသမမွှေပြီး တစ်နေလှန်းပါ။ ပြီးလျှင် တွင်းထဲသို့ တစ်ထွာခန့် ထပ်ဖြည့်ပါ။ ၎င်း အပေါ်မှ ထပ်မံ၍ မြေဆွေးအပြည့် ထည့်လိုက်ပြီး ပျိုးပင်ကို စိုက်ပျိုးပါ။
(၄) ပျိုးပင် (၂ ပေ)ခန့် ကြီးလာတဲ့အခါ အပင်ရင်း ပတ်လည်ကို မီးဖိုကရတဲ့ ပြာမှုန့်၊ မီးသွေးမှုန့်တွေကို အုံထားပေးပါ။ နံနက်စောစောနှင့် နေဝင်ပြီးချိန်၌ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ရေမှန်မှန် လောင်းရပါမယ်။
အဝါရောင်အသားရှိတဲ့ သင်္ဘောသီးကို အနီရောင်ဖြစ်စေချင်ရင်တော့ အောက်ခြေမှာ ဖြူးထားတဲ့ ထုံးမှုန့်ကို မီးသွေးအမှုန့်နဲ့ ဆတူရောစပ်ပြီး စိုက်ပါ။
ဆံပငျကြှတျတာကို သကျသာပွီး ဆံပငျ ပိုထူခငျြတဲ့ သူတှအေတှကျ နညျးလမျးကောငျး
အာရုံကွော အားနညျးနတေဲ့ လက်ခဏာမြား